မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်ပါသလား... - Min Oaker
ဗဟုသုတ မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်ပါသလား...
မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်ပါသလား...
by Min Oaker on 4:00 AM in ဗဟုသုတ
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ …. ။
ဒီပို့်စ်လေးကို မကျော်သွားခင် အချိန် (၅) မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ရပ်များ ကို လေ့လာနေကြတဲ့ …..အစ်ကိုတွေ အမတွေ အတွက် …. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ တက်ရောက်ပြီး လေ့လာ သင်ယူနေတဲ့ … မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ …. ။
ဒီနေ့ ၂၁ ရာစု ခေတ်ကြီးထဲမှာတော့ … ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက် အနေအထား အရ … မိုဘိုင်းဖုန်း ကိုင်တဲ့ လူအရေ အတွက် … သိသိသာသာ တိုးတက်များပြားလာခဲ့ပြီးးး မိုဘိုင်းဖုန်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခြင်း အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ နည်းပညာ ရှင်တွေလည်း အမြောက်အမြား လိုအပ်လာခဲ့ပါတယ် …. ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိ အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ရပ်များ ကို ကြိုးစား သင်ယူရင်းး သိသလောက် တတ်သလောက် မျှဝေပေးနေရင်းး မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း အတတ်ပညာ ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတာကြောင့် … ရန်ကုန် ကို သွားပြီး သင်တန်း တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ….. ။
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းကျောင်း နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် …. ။
အဲ့ဒါကတော့ … ရန်ကုန်မြို့ ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် -အင်းစိန်လမ်းနဲ့ ပါရမီ လမ်းထောင့် ၊ တိုက်(၁) ၊ အခန်း (၀၀၃) ၊ ပါရမီ အိမ်ရာ ၊ (၁၆) ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိတဲ့ The Last Mobile Service & Training Centre ပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။
Service & Training Centre ၊ သင်တန်းနဲ့ တွဲလျက် Service ပါ ဖွင့်ထားတာကြောင့် … လေ့လာ သင်ယူရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသား များ အဖို့ တကယ် Real Life လက်တွေ့ဘ၀ ထဲက နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးနိုင်လောက်တဲ့ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေရဲ့ Error ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ကို လက်တွေ့ သင်ယူ ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ် …. ။
Software ပိုင်း လေ့လာသင်ယူရတဲ့ အကြောင်းကို အရင်ဆုံး ရှင်းပြချင်ပါတယ် …. ။
Software ပိုင်း အတွက် သီးသန့် စီစဉ် ပေးထားတဲ့ အခန်းလေး ထဲမှာ သင်တန်းသား ခြောက်ဦး ၊ တစ်နေ့ကို ၂ နာရီ နဲ့ …. Laptop တစ်ယောက် တစ်လုံး စီ ၊ ဖုန်း ဟန်းဆက် တစ်ယောက် တစ်လုံး စီ နဲ့ သင်တန်း က ချမှတ် ထားတဲ့ သင်ရိုးတွေကိုလည်း လေ့လာရပြီး ၊ Customer တွေ လာအပ်တဲ့ Software နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Error များ ကိုလည်း တစ်ခါတည်း လေ့လာ သင်ယူရပါတယ် … ။ ( လက်တွေ့ပိုင်း လုပ်ကိုင်တဲ့ နေရာမှာတော့ .. သင်တန်းသား ခြောက်ဦး ကို နှစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့ စီ နဲ့ … သေချာ စနစ်တကျ ဖုန်း တစ်လုံး ကို လက်တွေ့ လေ့လာ စမ်းသပ် စေပါတယ် …… ) ။ တစ်ချိန်ကို သင်တန်းသား ခြောက်ဦးသာ ရှိတာကြောင့် … သင်တန်းသား တစ်ယောက်ချင်းစီ ကို ပိုမို ဂရုစိုက်နိုင်ပြီး တစ်ယောက် ချင်းစီ ကိုလည်း သေချာ လက်တွေ့ ပြုလုပ်စေနိုင်ပါတယ် … ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိ အတန်းဖော် တစ်ယောက်နဲ့ …. ကျွန်တော် သိထားတာလေးတွေ ပြော ၊ မသိတာတွေ ပြန်မေး ၊ ပညာတွေ ဖလှယ်ရင်းနဲ့ ဆက်လက် လေ့လာ သင်ယူနေပါတယ် … ။
သင်တန်းက ချမှတ်ထားတဲ့ သင်ရိုးတွေ ကတော့ … Android ပိုင်း အတွက် လက်ရှိ မိုဘိုင်း လောကရဲ့ ရေပန်း အစားဆုံး ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ … Huawei , Samsung , Sony , HTC , Lenovo , Coolpad အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေ အပြင်ကို တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ … Samsung Clone ဖုန်းလေးတွေ ၊ China Tablet အစရှိတာ တွေ ကို အကုန် လေ့လာ စေပါတယ် … ။ iOS အပိုင်း မှာတော့ … iPhone 3Gs က စလို့ …နောက်ဆုံး ထွက် iPhone6, 6+ တွေ အထိ ၊ iPod , iPad အစ ရှိတာတွေ နဲ့ … iOS ပိုင်းကို သေချာ ကျကျနန လေ့လာ သင်ယူစေပါတယ် … ။
Firmware ပြန်တင်တာတွေ ၊ Firmware ပြန်တင်ရင်း Version နှိမ့်တာတွေ ၊ မြှင့်တာတွေ ၊ မြန်မာစာဖောင့် ထည့်ပုံ ထည့်နည်းတွေ နဲ့ တစ်ခြားသော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ Software Error မှန် သမျှ ကို အကုန်လုံး လေ့လာ သင်ယူစေပါတယ် … ။ လေ့လာ သင်ကြားနေရင်း Software Error နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လက်ခ တောင်းယူပုံ တောင်းယူ နည်း က အစ တစ်ခါတည်း သင်ကြား ပေးပါတယ် … ။ အဲ့ဒါကြောင့် .. ဖုန်း တစ်လုံး အတွက် အနည်းဆုံး Firmware တင်ရင် ဘယ်လောက် ၊ မြန်မာစာဖောင့် ထည့်ရင် ဘယ်လောက် ၊ Root ဖောက် ၊ Application ထည့်ရင် ဘယ်လောက် ဆိုတာတွေ အတွက်ပါ ကျွန်တော် တို့ ကို သင်ကြား ပေးပါတယ် … ။
ကြီးကြီးမားမား Error မဟုတ်ပဲ …. Application တွေနဲ့ ညိပြီး ဖုန်း ဟန်း စေတာတွေ ၊ လေးစေတာတွေနဲ့ Low On Space ဖြစ်တာတွေ အကုန်လုံး အတွက်လည်းး အချိန် မကြန့်ကြာစေပဲ … ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ က အစ … သင်ကြားပေးပါတယ် … ။သင်တန်းပြီးသွား ရင် .. ကို ကိုယ်တိုင် Software ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လက်တွေ့ ပြန်လည် လုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့ Software တွေ ၊ Firmware တွေ ၊ Application တွေ ၊ Game တွေ ၊ Root Tools တွေ ၊ Jailbreak Tools တွေ အစရှိတဲ့ ဒေတာတွေ အတွက်ကို လည်း အထူး Special ဖြစ်အောင် စီမံ ပေးထားပါသေးတယ် .. ။
ဥပမာ အနေနဲ့ … Huawei ဆိုတဲ့ folder တစ်ခု အောက်မှာ …. ဟိုးးး ရှေးရှေးးး တုန်း က Fighter ဖုန်းတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ .. C8500 , C8600 က စလို့ … ဒီနေ့ နောက်ဆုံး ထွက်တဲ့ … Huawei ရဲ့ အကောင်းဆုံး ၊ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဖုန်းလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Mate7အထိ …. နောက်ဆုံးပေါ် Firmware တွေ အကုန်လုံးး … ။ ဖုန်း တစ်လုံး ချင်းစီ အတွက် သူတို့ရဲ့ Root file တွေ ၊ Custom Firmware file တွေ အားလုံး ကို မော်ဒယ် တစ်ခုရဲ့ Folder အောက်မှာ အားလုံး သပ်သပ်ရပ်ရပ်စီ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့ Service လုပ်ကိုင်တဲ့ နေရာ မှာ အရမ်းကို လွယ်ကူ ပြီး လျှင်မြင်စေပါတယ် … ။ Samsung , Sony အစ ရှိတဲ့ တစ်ခြားသော ဖုန်းတွေ အတွက် ကိုလည်းး အထက်ပါ အတိုင်း သေချာ စီစဉ် ပေးထားတာကြောင့် ဘာ ဖုန်း လာလာ အားလုံး နီးပါး လောက်ကို စုံနေအောင်လည်း ထည့်ပေးထားပါသေးတယ် … ။
လုပ်ပုံ လုပ်နည်း ထူးခြားတဲ့ ဖုန်းတွေ ၊ ပုံမှန် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် ကနေ ကွဲထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေ အတွက် ကိုတော့ … သေချာ စနစ် တကျနဲ့ Step by Step လုပ်ပုံ လုပ်နည်းတွေကို စာနဲ့ ( text file) နဲ့ တစ်မျိုး ပုံတွေနဲ့ တစ်မျိုး သေချာ ရှင်းပြထားတာကြောင့် … မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိစွာနဲ့ ဖုန်း တစ်လုံး ကို ချက်ခြင်း Service ပြုလုပ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
ထပ်ပြီး Pattern , Password Lock ကျသွားတဲ့ ဖုန်းတွေ အတွက်ကိုလည်း ဖုန်းထဲက Data တွေ မပျက်စေပဲ ADB Command တွေ အသုံးပြုပြီး ဖြည်တဲ့ နည်း ၊ နောက်ဆုံး မရ ရင်တော့ Data တွေ ဖျက်ပစ်ပြီး ဖြည်တဲ့ နည်းလမ်း အစုံကိုလည်း လေ့လာ သင်ယူစေပါတယ် … ။
အဲ့ဒါ တွေ တင် မကသေးပဲ … ယနေ့ လက်ရှိ ရေပန်း အစားဆုံး Facebook Account ဖွင့်တာ ၊ Gmail , Skype , WeChat , Viber Account ဖွင့်တာတွေ အကုန်လုံး ကို လည်း သေချာ စနစ်တကျနဲ့ သင်ကြား ပြသပေးပါသေးတယ် … ။ Facebook Account ကို Lock မကျအောင် ဖွင့်တာ ၊ Lock ကျသွားရင်လည်း ပြန်ဖြည်တာ တွေ ကိုလည်း သင်ယူ လေ့လာစေပါတယ် … ။
အဓိ က ကတော့ … Service ဆိုင် တစ်ဆိုင် ဖွင့် ဖို့ အတွက် ၊ Software Technician တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည် ဖို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ သင်ကြားမှု မျိုးတွေ နဲ့ … တစ်ခါတည်း မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှု ရှိလာအောင် ပါ .. လေ့ကျင့် သင်ကြားစေပါတယ် …. ။
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SOFTWARE ခန်းလေးပါ။။
ဒါတွေ ကတော့ Software ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ကြားပေးတဲ့ အပိုင်းတွေ ထဲက အနည်းငယ်ပါ … ။
ကျွန်တော်တို့ Service ဆိုင် တစ်ဆိုင် အတွက် အဓိက ငွေဝင်ပေါက် ကြီး ဖြစ်တဲ့ Hardware ပိုင်း အတွက်ကတော့ …တစ်နေ့ကို ၄ နာရီ သင်ကြားပေးပြီးး ပြောစရာ မရှိလောက်အောင် ၊ လိုလေသေး မရှိလောက်ကို .. အထူး Special ကို လေ့လာ သင်ယူစေပါတယ် … ၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပါတယ် …. ။
ပထမဆုံး သင်တန်း အစ ရက်ပိုင်းတွေမှာ ……ဖုန်းတွေ ကို မကိုင်ရသေးပဲ … Electronic အခြေခံ တွေ ၊ Hardware ပြုပြင်ခြင်း နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Theory ပိုင်းတွေ ကိုသင်ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တောင် ပျင်းသလိုလို ခံစား ရခဲ့ပါတယ် …. ။
တစ်ပတ်လောက် ရှိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ …. Power Supply အသုံးပြုပြီး ရှော့ ရှာနည်းများ ၊ Heat Gun အသုံးပြုပြီး IC တစ်လုံးကို ဖြုတ်ပုံ တပ်ပုံ … ၊ ခဲဂေါက် အသုံးပြုပြီး ခဲဖော်ပုံ ၊ ခဲရှင်းပုံ အစရှိတာတွေ ကို စနစ် တကျနဲ့ စပြီး သင်ယူ ရပါတော့တယ် … ။
ပျင်းဖို့တောင် အချိန် မရတော့ပဲ …. သင်သမျှ သင်ခန်းစာ တွေ အကုန်လုံး ကို တစ်လုံးမကျန် သေချာ လိုက်ပြီး မှတ် ၊ လက်တွေ့ လုပ်ရပါတော့တယ် …. ။ တစ်ဖြည်းဖြည်း သင်ရင်း သင်ရင်းနဲ့ .. Service ဆိုင် ကို လာပြင်ကြတဲ့ Customer တွေ ရဲ့ ဖုန်း တွေ နဲ့ ပါ တစ်ခါတည်း လက်တွေ့ သင်ကြားရပါတော့တယ် …. ။
နှစ်ပတ်လောက် ရှိလာတော့ .. Touch ကွဲတာတွေ ၊ LCD ကွဲတာတွေ ၊ ဖုန်း ပြောရင် တစ်ဖက် က မကြားရတာတွေ ၊ ကို့ဘက်က မကြားရတာတွေ ၊ ဖုန်း သံ မမြည် တဲ့ Error တွေ အတွက် စပြီး ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပြုပြင်ရပါတော့တယ် … ။
နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကို ပေးပြီး ပြုပြင်စေတဲ့ ဖုန်း အတွက် Touch , LCD စတဲ့ Spare Parts တွေ က အစ …ကိုယ်ကိုယ်တိုင် … Spare Parts ဆိုင် ကို သွားရောက်ပြီး စမ်းသပ်ဝယ်ယူစေပါတယ် … ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း တာဝန်ယူထားတဲ့ ဖုန်း အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို သွားရောက် ၀ယ်ယူပြီး ကိုယ်တိုင် ဖြုတ် ၊ ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ပြီး ကိုယ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဖုန်း ပိုင်ရှင် Customer နဲ့လည်း Error ပိုင်း ကို ရှင်းလင်းပြပြီး တစ်ခါတည်း လုပ်ဆောင် စေပါတယ် … ။Spare Parts ပစ္စည်းတွေ ကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ၀ယ်ယူ ရတာကြောင့် … Spare Parts ဆိုင်က ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ အတန်သင့် ရင်းနှီးနေပြီး ကျွန်တော် ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရင် အဆင်သင့် ကူညီ ကြမယ် လို့ တောင် ကျွန်တော့်ကို ပြောနေကြပါပြီ …. ။
မော်ဒယ် မြင့် ဖုန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Samsung Note2 , Note3 , S3 , S4 , Mega အစ ရှိတဲ့ ဖုန်းတွေ အတွက် အပေါ်မှန် သီးသန့် လဲလှယ်နိုင်အောင် နောက်ဆုံး ပေါ် ခေတ်မှီ မှန် ဖြုတ် စက်သစ်ကြီးတွေ နဲ့ … ကျွန်တော်တို့ ကို သင်ကြား ပေးရင်းး ၊ Customer တွေ အတွက်လည်း ဈေးနှုန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပြုပြင် ရင်း တစ်ချက် ခုတ် နှစ်ချက် ပြတ်နဲ့ အားလုံး ကို အဆင်ပြေစေပါတယ် …. ။
Samsung S3 , Note2 တွေ မှာ အဖြစ်များ ဆုံး ဖြစ်တဲ့ … EMMC Error တွေ အတွက်ကိုလည်းး Hardware ဆရာ ကိုယ်တိုင် သေချာ စနစ်တကျနဲ့ လဲလှယ်ရင်း ၊ သင်ကြား ပြသပေးရင်းနဲ့ .. နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ … Fake IMEI Error , IMEI null/null Error တွေ အတွက် ကိုလည်း စနစ်တကျ လေ့လာ သင်ယူ စေပါတယ် …. ။
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း မိုဘိုင်း ဖုန်း တစ်လုံး ရဲ့ Error တွေ ကို အခြေခံ ကနေ စပြီး လမ်းကြောင်းတွေ အထိ လိုက်တတ်နေပါပြီ … ။ ဆက်လက်လည်း လေ့လာ သင်ယူနေပါတယ် … ။
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HARDWARE အခန်းလေးပါ။။
အဲ့ဒါတွေ ကတော့ .. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ သင်ကြားနေရတဲ့ သင်ကြားပုံတွေပါ …. ။
သင်တန်း ဆရာတွေ ကိုယ်တိုင် က လူငယ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် …… ပေါ့ပေ့ါပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ .. စာသင်နေတဲ့ ပုံစံ ကနေ ခွဲထွက်ပြီး အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာတွေ ကို မျှဝေပေးတဲ့ ပုံစံ လေး ဖြစ်အောင် ကို လေ့လာ သင်ယူစေတာပါ … ။ ဆရာတွေနဲ့ သင်တန်းသားတွေ ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူငယ်ချင်း လို၊ ညီအစ်ကို လို ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းလို ခင်မင် ရင်းနှီး စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံ ကြရင်းနဲ့ …. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စ လိုက် ၊ နောက်လိုက် ပြောင်လိုက် ၊ ဆရာ စာ မေးလို့ မရရင် ၀ိုင်း ရီ လိုက်ကြနဲ့ ….. လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ သင်တန်း ပြီးမှာ ကိုတောင် ကျွန်တော် တော်တော် ကြောက်နေရပါပြီ .. ။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ ၁၂ လပိုင်း ၊ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် တို့ သင်တန်း အပတ်စဉ် (၄) က သင်တန်းသားတွေ အကုန်လုံး ဟာ ဒီနေ့ အချိန်မှာတော့ … မိတ်ဆွေ ၊ သူငယ်ချင်း ၊ အပေါင်းအသင်း ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ … မိသားစု လေး တစ်ခု လို ဖြစ်နေကြပါပြီ …. ။
ဒါလေးကတော့ သင်တန်းရှေ့မှာ စုရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။။
Software , Hardware နှစ်ခု လုံး တက်ရင် အဆောင်နေရာပါ အခမဲ့ စီစဉ် ပေးတာကြောင့် …ဘီလူးကျွန်းသားလေး ကျွန်တော် Min Oke Kar အဖို့ သင်တန်း က စီစဉ်ပေးတဲ့ အဆောင်မှာ နေရင်းး ဆိုးတူ ကောင်းဖက် အဆောင် တစ်ခု ထဲ နေ သင်တန်း သား များးနဲ့လ ည်း ခင်မင် ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့ပါတယ် … ။
သင်တန်းပြီးဆုံး သွားတဲ့ သင်တန်းသား များ အတွက်လည်းး အချိန်မရွေး သင်တန်း ကိုလာပြီး အသစ်ထွက် နည်းပညာ ရပ်တွေ ကို လေ့လာ သင်ယူစေရင်းးး မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ရပ်များ နဲ့ အဆက် မပြတ်သွားအောင်လည်း ကူညီ ပေးပါသေးတယ် … ။
လက်ရှိ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်းး သင်တန်းပြီးသွားရင် အတွေ့အကြုံ ထပ်မံ ရယူချင်သေးတာကြောင့် နယ် မပြန်သေးပဲ … ဒီမှာ ပဲ ဆက်လက် လေ့လာ ဆည်းပူး နိုင်ဖို့ ဆရာ့ ကို ခွင့်တောင်းထားပြီးပါပြီ …. ။
အဲ့ဒါတွေ ကတော့ .. လက်ရှိ ဒီနေ့ ဒီ အချိန်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လေ့လာ တက်ရောက် ပြီး ပညာ ဆည်းပူးနေတဲ့ The Last Mobile Service & Training Centre ပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။
အခု ကျွန်တော် တို့ အပတ်စဉ် (၄) တန်းခွဲ တွေ အကုန်လုံး ၁ လပိုင်း ၁၅ ရက်လောက်မှာ ပြီးဆုံး မှာ ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် (၅) အတွက် ကိုတော့ … ၂ လပိုင်း ၃ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး သင်ကြားပေးမယ်လို့ သိရပါတယ် … ။ Software ပိုင်း အတွက် ကွန်ပျူတာ အခြေခံ ပါ လိုအပ်တာကြောင့် ကွန်ပျူတာ အခြေခံ လိုအပ်သူတွေ အတွက်ကိုတော့ … ၁ လပိုင်း ၂၂ ရက်နေ့ ကတည်းက စပြီး ကွန်ပျူတာ အခြေခံတွေ စတင်ပြီး သင်ကြားပေးမယ်လို့ သိရပါတယ် …. ။
သင်တန်းမှာ လက်ရှိ သင်ကြားပေးနေတဲ့ သင်တန်း ချိန်တွေ ကတော့ …
SOFTWARE သင်တန်း ချိန်များ
--> 10:00 AM ~ 12:00 AM ( နံနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၁ နာရီ )
--> 12:30 PM ~ 2:30 PM ( နေ့လည် ၁၂ နာရီ မှ နေ့ခင်း ၂ နာရီ )
--> 3:00 PM ~ 5:00 PM ( ညနေ ၃ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီ ) ထိ တစ်နေ့ ၂ နာရီနဲ့ တစ်ပတ် ခြောက်ရက် ( တနလာင်္ ~ စနေ )
HARDWARE သင်တန်း ချိန်များ
--> 10:00 AM ~ 2:00 PM ( နံနက် ၁၀ နာရီ မှ နေ့လည် ၂ နာရီ )
--> 3:00 PM ~ 7:00 PM ( ညနေ ၃ နာရီ မှ ညနေ ၇ နာရီ ) ထိ
တစ်နေ့ ၄ နာရီနဲ့ တစ်ပတ် ခြောက်ရက် (တနလာင်္ ~ စနေ )
စတဲ့ အချိန်တွေပါ .. ။ ကျွန်တော်ကတော့ .. မနက် ၁၀ နာရီ ကို Hardware ပိုင်း တက်ပြီးး ခဏ နားတာနဲ့ အဆောင်ပြန် ရေမိုး ချိုးပြီး Software တန်း အတွက် သင်တန်း ကို ပြန်လာပြီး သင်ယူပါတယ် … ။
သင်တန်း ကြေးကတော့ … တစ်မျိုးစီ အတွက် ၂ သိန်း စီ ၊ နှစ်မျိုး ပေါင်းအတွက် ၄သိန်း သွင်းရပါတယ် … ။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို .. သင်ကြားမှု တွေနဲ့ … ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းသားတွေ အတွက် … ပေးထားတဲ့ Service တွေက … ပေးရတဲ့ သင်တန်းကြေး ထပ် ပိုတဲ့ .. သင်တန်းရဲ့ စေတနာတွေကိုပါ ရရှိစေပါတယ် … ။
ကျွန်တော် ကတော့ … ဒီနေ့ အချိန်ထိ ဆရာတွေ သင်ကြားပေးတဲ့ မိုဘိုင်း ဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်တွေ ကို ကြိုးကြိုးစားစား နဲ့ လေ့လာ သင်ယူနေရင်းး တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော် ၀ါသနာ ပါတဲ့ … ကျွန်တော် တတ်သလောက် မှတ်သလောက်လေးတွေ ကို Blog လေးမှာ မျှဝေပေးရင်းးး … နဲ့ ဒီ့ထက် ပိုပြီး တိုးတက်အောင် ဆက်လက် လေ့လာ သင်ယူ ဆည်းပူး နေဦးမယ်လို့ ပဲ .. စိတ်ထဲမှာ ဆုံး ဖြတ်ထားပါတော့တယ် …. ။
ကျွန်တော့်လိုပဲ … မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ရပ်တွေ ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဆိုင်ဖွင့်မယ် ၊ Technician လုပ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုချင်တဲ့ ညီအစ်ကို တွေ ၊ သူငယ်ချင်း တွေ အဖို့ … လက်ရှိ ကျွန်တော် သင်ကြားနေတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းပါ ခင်ဗျာ … ။
The Last Mobile Service & Training Centre ကို
ဆက်သွယ် ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ …
တိုက်(၁) ၊ အခန်း (၀၀၃) ၊ ပါရမီ အိမ်ရာ ၊ (၁၆)ရပ်ကွက် ၊ ရန်ကုန် - အင်းစိန် လမ်းမကြီး နှင့် ပါရမီ လမ်းထောင့် (ပါရမီ မီးပွိုင့်အနီး ) ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မြို့နဲ့ … ဖုန်းနံပါတ်တွေ ကတော့ …09-33-80-5581 , 09-33-80-5591 စတဲ့ ဖုန်းတွေ ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ် ဗျာ … ။
သင်တန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိရှိချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ .. The Last ရဲ့ Facebook Page ဖြစ်တဲ့ … http://www.facebook.com/thelast2014 Page ကို လည်း Like လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါသေးတယ် …. ။
အချိန်ပေးပြီး ကျွန်တော် မျှဝေတာလေးကို ဖတ်ရှု ပေးကြတဲ့ ….. သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး အတွက် အထူး ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ … ။
Min Oke Kar (နည်းပညာ မှတ်စု)
By Min Oaker at 4:00 AM